Himalaya Dainik » विदेशबाट फर्कनेेेेलाई एअरपोर्टमा झनै कडाई : कुन सामानको भन्सार मूल्य कती ?
विदेशबाट फर्कनेेेेलाई एअरपोर्टमा झनै कडाई : कुन सामानको भन्सार मूल्य कती ?
सरकार विदेशबाट फर्कनेहरुले ल्याउने सामानमा झनै कडाईका साथ कार्यान्वयनमा उत्रिएको छ । सोमबारमात्र सरकारले विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुले बढी परिणाममा ल्याएको सामान बिक्रीका लागि सुचना निकालेको छ । जुन सरकारले जफत गरेको थियो । यसबाटै पुष्टि हुन्छ सरकारले कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले झिटी गुन्टा आदेश भन्दा एउटा पनि बढी सामान ल्याए जफत गरिने भनेका थिए । उनले कानुन र सरकारको आदेश उल्लंघन हुन नदिन कडाइका साथ त्यस्ता सामानको भन्सार जाँच गर्ने भनेका थिए ।
सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विदेशबाट फर्कदा हवाइयात्रुले के-के ल्याउन पाउँछन्, ती सामानको भन्सार महसुल कति तिर्न पर्छ। ताकी ठुलो खर्च गरेर भित्र्याएको सामान भन्सारमै जफत नहोस ।
विदेशबाट फर्कदा कुन सामान ल्याउँदा पूर्ण भन्सार महसुल छुट हुन्छ ?
सुचनाको दफा एकमा लुगाफाँटा, घरगृहस्थीका सामान, उपचार गरेर फर्केको विरामीले ल्याएको औषधी, अशक्त यात्रुले साहाराका रुपमा प्रयोग गर्ने सामान, ट्याबलेट, ल्यापटप, घडी, क्यामेरा, भिडियो, सेलुलर, फेन ड्राइभ जस्ता सामान एक/एक थान ल्याउँदा पूर्ण छुट हुनेछ भनिएको छ । यसमा यात्रुले कुनै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने छैन । एक लिटरको मदिराको बोतल र सातकिलो ग्रामसम्मको खाद्य परिकारमा पनि भन्सार महसुल लाग्ने छैन ।